जाडोमा हुनसक्छ निमोनिया, यसरी बचौँ -
काठमाडाैं– काठमाडौंमा मात्र होइन, नेपालभर नै चिसो निकै बढिसकेको छ । जबजब चिसो याम सु? हुन्छ, फोक्सो तथा छातीमा चिसोका कारण हुने संक्रमण पनि बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। झन्, नेपालमा वर्षेनी निमोनियाका बिरामी बढ्दै छन् । त्यसैले यसबारे सतर्क हुनु राम्रो हो ।
आज १२ नोभेम्बर । यही दिनलाई विश्वभर निमोनिया दिवसका ?पमा मनाइन्छ । सन् २००९ देखि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
पाँच वर्ष मुनिका बालालिका, प्रौढ तथा गर्भवती महिलाह?लाई निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ । निमोनिया भएपछि फोक्सोका कोषह? सुनिन्छन्, श्वासप्रश्वासमा समस्या आउन सक्छ । निमोनिया ब्याक्टेरिया तथा भाइरसका कारण हुन्छ ।
लामो समयदेखि मिर्गौला, फोक्सो तथा कलेजोमा समस्या भएर औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिह?लाई निमोनिया हुने सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।
लगातार लामो समयसम्म खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, खकार आउने, जिउ दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएमा निमोनिया भएको हुनसक्छ । निमोनिया भएका बालबालिकाले सहजै खानपिउन सक्दैनन्, उनीह?लाई आमाको दुध खान पनि समस्या हुन्छ ।
निमोनियाको उपचार भनेको एन्टिबायोटिक औषधिको सेवन हो ।
निमोनियाको उपचार तीन चरणबाट गर्ने सकिन्छ । सामान्य ज्वरो खोकी मात्र रहेछ भने बिरामीलाई सामान्य उपचार गर्न सकिन्छ ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या, छाती दुख्ने, खकारमा रगत देखिइसकेको छ भने बिरामीलाई अस्पतालमा नै भर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ । अत्यन्त धेरै बिरामी भएकाह?लाई चाहिँ अस्पतालमा नै भर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
निमोनिया स?वा रोग हो, निमोनिया भएका मानिस वरपर रहने अन्य मानिसह?लाई पनि निमोनिया हुनसक्छ ।
जाडोमा निमोनिया बढी हुने भएकाले खानपानदेखि मौसमको समेत ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
बलिउडका ५ चर्चित कमेडियन, जसको अनुहार देख्दा दर्शक हाँस्छन्